हाम्रो कन्सल्टेन्सिमा एउटा लिमिट जसमा हामी खुसी छौँ : नेपाल एडुकेशन कन्सल्टेन्सि प्रवन्धक निर्देशक थरेन्द्र राज अधिकारी - Shiksha Sansar
प्रकाशित मिति: ११ जेष्ठ २०७६, शनिबार May 25, 2019
काठमाडौँ ११ जेठ । विगत १८ वर्षदेखि विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको लागी बाहिर जान सहयोग गरिरहेको नेपाल एडुकेसन कन्सल्टेन्सिले अबका आउने दिनमा कसरि विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्दैछ र यसका आगामी योजनाहरु के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा आधारित भएर ‘नेपाल एडुकेशन कन्सल्टेन्सिका’ प्रवन्धक निर्देशक थरेन्द्र राज अधिकारीसँग शिक्षा संसारकर्मी अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानी संक्षेपमा:
तपाईको कन्सल्टेन्सी कहिले स्थापना भयो ?
हाम्रो कन्सल्टेन्सी सन् २००१ मार्च ६मा स्थापना भएको हो र हामी अहिले १८ वर्षको अनुभव संगाली सकेका छौँ ।
विद्यार्थीहरुलाई पढ्नकोलागी कुन कुन देशमा पठाउनुहुन्छ ?
हामीले पहिला स्थापना कालमा अमिरिका र युकेलाई बढी प्राथामीकता दिएर विद्यार्थीहरु पढाउने गरेका थियौँ त्यसपछि हामीले स्वीजरल्यान्ड,नेदरल्यान्ड, साउथ अफ्रिका, अस्ट्रेलिया पठायौँ र अहिले हामीहरुले सबै भन्दा बढी अस्ट्रेलियालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ । लगभग हामीले सोह्र सत्र वटा देशहरुमा हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई पढाएका छौ ।
कुन कुन विषय पढ्नको लागी विद्यार्थीहरुलाई बाहिरी देशहरुमा पठाउनुहुन्छ ?
नर्मल चलिरहेको विजनेश इन्जीनेरिङ, आइटी, मेडिकल लाइन तिर डेन्टल,साइन्सहरु र त्यसबाहेक, हामीले पहिला पाइलट ट्रेनिङमा पनि विद्यार्थीहरु पठाएउने गरेका थियौँ जो अहिले भने पढाउन छोडेका छौँ । अहिले हामी अस्ट्रेलियार इन्लिस कन्ट्रीहरुलाई बढी प्राथमीकता दिने गरेका छौँ ।
विद्याथीहरुलाई विदेशमा पढ्न पठाउदाँ कस्ता चुनौतीहरु छन् ?
विद्यार्थीलाई विदेश पढाउन पठाउँदा चुनौतीहरु भन्दा पनि विद्यार्थीको क्षमताको कुरा हुन्छ । विदेश पढ्न जान चाहने कुनै विद्यार्थी त्यहाँ जाने क्षमता राख्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा हो उसको पढाईको क्षमता र अर्को उसको पारिवारिक क्षमताको कुरा पनि आउँछ । किन कि विद्याथीले जान चाहेको क्यामस वा विश्व विद्यालयको शैक्षिक शुल्कको कुरा आउछ । विद्याथीले आफैले काम गरेर आफ्नो पढाई गर्न सक्दैन् किन भने उ पढनको लागी गएको हो । उसले पढाईलाई बढि ध्यान दिनुपर्ने भएका कारण उसको परिवारले विद्याथीलाई विदेशमा पैसा नपुगेको खन्डमा पैसा पठाउन सक्छन कि सक्दैनन् । उसको परिवारको आय स्रोत के छ विद्यार्थी पढाईको क्षमता कस्तो यी सबैकुराको अध्ययन गरेर हामीले विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा पढ्न पठाउने भएका कारण यसमा म खासै चुनौतीहरु चाहीँ देख्दिन् ।
सरकारको तर्फबाट तपाईको अपेक्षा के छ ?
सरकारले चाही के गरिदिए हुन्थ्यो भने हामीले जति पनि विद्यार्थीहरु पठाएका छौ त्यमा धेरै जसो विद्यार्थीहरु नेपाल आउन चाँही रहेका हुन्छन् । यो हामीले विद्यार्थी पठाउन लागेदेखीको अनुभव हो । त्यसैले नेपाल आउन चाहेका विद्यार्थीहरुलाई नेपाल सरकारले स्थापीत हुने बजार, अथवा उनीहरुको क्षमता बमोजीमको रोजगारी सृजना गरिदियो अथवा कुनै अवसर प्रदान गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
यहाँ बाट पढ्न गएका विद्याथीहरु कत्तिको सुरक्षित छन् ?
असुरक्षित भन्ने कुरा त अहिले सम्म मैले अनुभव गरेको छैन् । हामीले हाम्रो यस नेपाल एडुकेशन कन्सल्टेन्सीबाट जति पनि विद्यार्थीहरु पढनको लागी विदेश गएका छन् ती सबै सुरक्षित नै छन् किन भने हामीले विद्याथीको हरेक कुरालाई विचार गरेर पढ्न पठाउने भएका कारण हाम्रा विद्यार्थीहरु सुरक्षित छन् । विद्यार्थीहरु पढ्न जाने कतिपय कलजे तथा विश्वविद्यालयहश्रमा हामी आफै पनि कति ठाँउमा गएर त्यहाँको बारेमा बुझेर मात्रै विद्यार्थीहरु पठाउने भएका कारण पनि हाम्रा विद्यार्थीहरु सुरक्षित छन् ।
वार्षिक रुपमा विदेश पढ्नको लागी कति विद्याथीहरु पठाउनुहुन्छ ?
हामीले वार्षिक रुपमा पचाँस देखी साठी जना जति पठाउने गरेका छौँ ।
विदेश पढ्न जानको लागी पक्रिया के छ ?
विदेश पढ्न जाने पहिलो प्रक्रिया भनेको विद्यार्थीको इच्छा हो यदी विद्यार्थीको इच्छामा परिवारको सर्पोट छ भने त्यस्तो खासै अप्ठारो प्रक्रिया छैन् । हामीले गारो प्रक्रिया भन्ने केहि पनि देख्दैनौ । प्रकिया भन्नाले पढ्नको लागी विदेश जान के के गनुपर्छ भन्न खोजेको त्यसको प्रक्रिया फरक हुन्छ
कुनै देशमा जानको लागी आएल्स गर्नुपर्छ कुनै देशमा नपर्ला कुनै देशमा बैक व्यालेन्स देखाउनुपर्छ कुनै देशमा नपर्ला त्यसैले समग्र रुपमा भन्नेहो भने एक किसीमको इन्लीस कन्ट्रीमा जाँदा चाहीँ आएलस अथवा टोफेल पढ्नुपर्ने हुन्छ । तर बहिर जाने इच्छा राख्ने विद्यँर्थीको लागी भने आईएलटिएस् सामान्य कुरा हो ।
तपाईको कन्सल्टेन्सी अरु कन्सल्टेन्सी भन्दा के कुरामा भिन्न छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले विद्यार्थीलाई कुन देश, कुन कलेजमा पढ्ने जाने भन्ने कुरामा गाईड गर्ने गर्दछौ । कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने विषयमा हामीले जाने बुझेकाले विद्यार्थीहरु पनि आउनछन् । हामी भन्दा धेरै विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सिहरु पनि छन् तर हाम्रो कन्सल्टेन्सिमा एउटा लिमिट छ र त्यसैमा हामी खुसी छौ । विद्यार्थीहरु जुन उदेश्य लिएर यहाँ बाट गएका हुन्छन् ।
त्यसैमा अडिग रहेर उनीहरुले आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । हामीले बेलाबेला देशहरुमा गएका विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका घटनाहरु सुनिरहेका हुन्छौ । यस्तो कुरामा चाहि हामीले विचार गरेर कु विद्याथी कस्तो छ , जता जादा उसलाई भविष्यमा यस्ताृ खालको समस्या आउदैन त्यो हेरेर हामीले विद्यार्थीहरुलाई बाहिर पठाउने गरेका छौ ।
कन्सल्टेन्सिका कतिपय कुराहरु उठाउनु भयो । यसलाई कन्टिन्यु दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ । हामीले भनेकोले मात्रभन्दा पनि तपाईहरुले आफ्नो तर्फबाट जाचँ गरेर हेर्नुभयो भने बाहिर विद्यार्थिहरुमा पनि झनै राम्रो प्रेभाव पर्ने थियो ।